Mitovy tanteraka aminao Wheels
'Ny olona manao ny marina sy ny tsy fivadihana mila, toy ny fiara na sarety mila kodiarana.'
- ny Confucius
Shanghai Feipeng Automotive Teknolojia Co., Ltd specializes amin'ny kodiarana sandoka famolavolana sy fanamboarana. Feipeng mijoro ny kalitao sy ny famirapiratana ary hametraka anareo tsy ethnical Shinoa iray marika: Niyue. Feipeng kodiarana ihany koa dia manolotra anao manokana OEM famolavolana asa fanompoana sy asa fanompoana.
Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny CAW (Shina Aluminum Wheel Quality Association), Feipeng kalitao manaraka fitsipika hentitra. Ny injeniera sy ny kalitaon'ny ekipana Feipeng manana mihoatra ny 40 taona traikefa eo amin'ny orinasa fanamboarana kodiarana, ary foana ny manao ny manome fampisehoana avo sady mitondra endrika sandoka kodiarana ho anao. Ny ekipa matihanina sy ny fitaovana tsara antoka ny diany soa aman-tsara.
Niyue sandoka kodiarana mitondra amin'ny asa tanana nentim-paharazana Shinoa izay mahatonga Vita avy any Shina mirehareha indray!
Tombony ny NIYUE
Independent marika , patanty famolavolana, thematic andian-dahatsoratra , tsy misy fisandohana, tsy mivadika injeniera. Ny sary mahery famolavolana sy CAE fandalinana hamela fahaizany manokana ao anatin'ny 3 andro famolavolana
iRacing milina manokana eo amin'ny tsena dia be ny antonony mpanamboatra kodiarana namboarina. Lead ny fotoana dia 30 andro
Manaraka tanteraka tarehiny sy ny fomba fanaraha-maso kalitao. Ny sasany amin'ireo fepetra mihoatra Etazonia sy ny Japoney indostria fitsipika toy ny hoe mihazakazaka-lavitra sy ny fihetsehan'ny mandanjalanja.
Detialed fiantohana kalitao mpanjifa politika mba hiarovana ny zon'ny. Feipeng vokatra rehetra manana fiantohana kalitao androm-piainany, ary 18 volana coating Warranty.
Čas Market, Shanghai, Shina